Maamulka Gobolka Bakool Oo Digniin Adeg U Diray Ganacsatada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maamulka Gobolka Bakool Oo Digniin Adeg U Diray Ganacsatada
Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Bakool Shiine Macalin Nuur ayaa sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo sidii ay dib u furi lahaayeen waddooyinka xiran ee soo gala magaalada Xudur, maadaama ay go’doomiyeen Al-Shahaab.
Guddoomiye Shiine oo la hadlay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in kulan dhawaan uu la qaatay ganacsatada kala hadlay in gaadiidka xamuulka ay soo mariyaan waddooyinka dowladda gacanta ku heyso, isagoo digniin u diray ganacsatada baal marto awaamiirta maamulka.
“Ganacsatada waa labo nooc, kuwo fuliyo awaamiirta maamulka iyo kuwo iska indha tiro amarada, anaga ka maamul ahaan waxaa naga go’an illaalinta hantida iyo muwaadiniinta, sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inay ganacsatada u hogaansami doonaan go’aanada maamulka “ayuu yiri Guddoomiye Shiine.
Guddoomiyaha mar uu ka hadlayay barakacayaasha ku sugan Xudur, ayaa waxa uu sheegay inay sameyn doonaan qorsheyaal dib loogu celin doono deegaannada ay ka soo barakaceen, ayna ka dulqaadi doonaan Al-Shabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Gobolka Bakool ayaa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, si loo dar dargeliyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Maamulka Gobolka Bakool Oo Digniin Adeg U Diray Ganacsatada was last modified: December 22nd, 2020 by Admin
Dhageyso+Sawiro:-Munaasabad lagu abal marinaayay Xaafadaha Kaalinta kagalay Tartan aqooneedkii Bishii Ramadaan ee ay Qabatay Garab walaal iyo Radio Warsan ooBaydhabo laguqabtay
Askarigii ugu horeeyay ee ciidamada Amisom oo laga helay Coronavirus
Webiga Jubba oo Fatahaad ka sameeyay degmada Baardheere